3D Daisy Live Wallpaper 🌼 Spring Field Themes အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.6 | 500,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（24.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် 3D Daisy Live Wallpaper 🌼 Spring Field Themes
3D DAISY LIVE WALLPAPHERS 🌼နွေ ဦး လယ်ကွင်းခေါင်းစဉ်များ
သည် HD နောက်ခံ, နာရီ, နာရီ, Emoji, Emoji, Emoji, 3D နောက်ခံပုံများနှင့်အတူအခမဲ့ wallpapers app ဖြစ်သည်။
🌼 အခမဲ့ Live Wallpapers
3D DAISY LIVE WALDPAPERS
နွေ ဦး ရာသီနှင့်ရောင်စုံပန်းပွင့်များ, အဖြူရောင်ပန်းပွင့်နောက်ခံများ, , ဘောင်, ကာနထိတွေ့မှု, analog နာရီ, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, free screen on lets!
❤️ အခမဲ့ Android Wallpapers
HD Live Wallpapers များသည် Samsung Galaxy ဖုန်းများကဲ့သို့သော Android ဖုန်းများအနေဖြင့်အန်ဒရွိုက်ဖုန်းများ, 3D daisy live wallpaper နှင့်အဖြူရောင်ပန်းပွင့်နှင့်ရောင်စုံပန်းပွင့်များ HD နောက်ခံပုံသည်တက်ဘလက်များ၌အလုပ်လုပ်သည်။
🌼 br >> enoji, clocks, frames, emoji, animated Daisies, Magic Touch ကိုနောက်ခံပြောင်းလဲသွားသောအရာသို့မဟုတ်၎င်းကို 3D နောက်ခံပုံများသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံများ (parallax အကျိုးသက်ရောက်မှုပါသည့် parallax နောက်ခံပုံများ) ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
❤️ က parallax အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးပါ။
အဖြူရောင်ပန်းပွင့် 3D နောက်ခံပုံသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံ။ Parallax နောက်ခံပုံသည် 3D အနက်နှင့်အဖြူရောင်ပန်းပွင့် HD Placepapers များကိုအေးမြသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုပေးသည်။
🌼 🌼 / b> 🌼
သင့်ရဲ့ HD နောက်ခံတစ်ခုထဲကတစ်ခုရွေးနိုင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံများကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။ သင်မှော်ထိတွေ့မှုနှင့်အလိုအလျောက်နောက်ခံပြောင်းလဲသွားသောအလိုအလျောက်နောက်ခံပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
💖 daisy live wallpaper သို့ဓာတ်ပုံဘောင်များထည့်သွင်း
actric touching တွင်ကာတွန်းကားများရှိကာတွန်း daisies များကိုပြောင်းပါ။ 💖မှော်ထိတွေ့မှု (အရောင်အမှုန်နှင့်အသံ) ကိုထည့်ပါ သင်၏ကီးဘုတ်
Live Wallpaper ကို 3D နောက်ခံပုံများသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံများ (Parallax Wallpaper)
3D DAISY LORT Wallpaper app> Forest Wallpapers အချို့ကိုအခမဲ့ သင်၏ Android ဖုန်းနှင့်မကြာခဏအေးမြသောနောက်ခံအသစ်များ!
အကောင်းဆုံးနောက်ခံပုံများကိုအခမဲ့ဖုန်းနောက်ခံပုံများဖြင့်ရယူပါ။ HD Wallpapers app တွင် Wallpapers app တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း Wallpaper Apps! Wallpaper hd ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ 🕙, သင်၏အမည် em, emoji animations 🆕, emoji ကာတွန်း👉, emoji ကာတွန်း👉, အမှုန် HD Theme ✨, အခြားတိုက်ရိုက် wallpapers:
href =" https://play.google.com/store/apps:/detafs=Spose .Petal.Clock.clock.closifelific ">
ပန်းပွင့်များ Blossoms close close close close close
Samsung Galaxy (J7 Prime), Xiaomi, Huawei, LG, Lenovo, Sony, Pixel, HTC, HTC, HTC, HTC, HTC, HTC, HTC, HTC, HTC, HTC, 😊
ဘာအသစ်လဲ 3D Daisy Live Wallpaper 🌼 Spring Field Themes 6.7.10
The best 3D live wallpaper on iPhone X,11,12